सर्वश्रेष्ठ nootropic पाउडर निर्माता र कारखाना
भिसापाउडरसँग नूट्रोपिक्स पाउडरको कच्चा मालको पूर्ण श्रृंखला रहेको छ, र कुल गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली छ।
Aniracetam पाउडर (72432-10-1)
बीटा कार्बोलिन पाउडर (२244-63--3)
Centrophenoxine पाउडर (3685 84-5-))
Choline Bitartrate पाउडर (-87-67-२)
कोलोरासिटाम पाउडर (१135463--81१-))
कम्पाउन्ड P पी पाउडर (१7 1890208 ०२०58--8-XNUMX)
डिहाइड्रोपाइन्ड्रोस्टेरोन (DHEA) पाउडर (-53 43--0-०)
डिहेक्सा (PNB-0408) पाउडर (1401708-83-5)
Fasoracetam पाउडर (११० 110958 19-१-5-))
गलान्टामाइन हाइड्रोब्रोमाइड पाउडर (१ 1953 04-०4--XNUMX)
ग्यालेन्टामिन पाउडर (69353 21-२१-))
Nootropics पाउडर वा स्मार्ट ड्रगहरू ज्ञात कार्यक्षमता बढाउने कम्पाउन्ड मिश्रण वा पूरकहरू हुन्। तिनीहरू स्मृति, रचनात्मकता, प्रेरणा, र ध्यान जस्ता मानसिक कार्य बढाउँदै काम गर्दछन्। भर्खरका अनुसन्धानहरू सिंथेटिक र प्राकृतिक उत्पादहरूबाट उत्पन्न गरिएको नयाँ सम्भावित नूट्रोपिक्स स्थापनामा केन्द्रित थिए। दिमागमा नूट्रोपिक्सको प्रभाव व्यापक रूपमा अध्ययन गरिएको छ। Nootropics मेकानिजमेन्ट वा पथको संख्याको माध्यमबाट मस्तिष्क प्रदर्शन प्रदर्शन गर्दछ, उदाहरणका लागि, डोपामिनर्जिक मार्ग। अघिल्लो अनुसन्धानहरूले मेमोरी डिसआर्डरहरू जस्तै अल्जाइमर, पार्किन्सन र हन्टिंग्टनको रोगहरूको उपचारमा नूट्रोपिक्सको प्रभाव रिपोर्ट गरेको छ। ती विकारहरू नूट्रोपिक्सको उही मार्गहरूलाई बिगार्न मनाइन्छ। यसैले, हालसालै स्थापित नूट्रोपिक्स संवेदनशील र प्रभावकारी मार्गहरूका लागि डिजाइन गरिएको छ। जिन्कोगो बिलोबा जस्ता प्राकृतिक नूट्रोपिक्सहरू लाभदायक नूट्रोपिक्स बेनिफिटहरूलाई समर्थन गर्न व्यापक रूपमा अध्ययन गरिएको छ।
त्यहाँ दुई फरक नूट्रोपिक्सहरू छन्: सिंथेटिक, एउटा प्रयोगशालाले बनाएको पिरासेटम पाउडर जस्ता यौगिक, र उल्लेखनीय प्राकृतिक र हर्बल नूट्रोपिक्स, जस्तै जिन्कगो बिलोबा र पेनाक्स क्विन्कोफोलियस (अमेरिकन जिन्सेng्ग)। Nootropics मस्तिष्कको कार्यलाई बढावा दिईएको बेलामा मस्तिष्कलाई स्वस्थ बनाउँदछ।
Nootropics को कार्य को संयन्त्र
सर्वश्रेष्ठ Nootropics पाउडर मस्तिष्क मा malondialdehyde स्तर कम गर्दछ, antioxidant अणु को स्तर बढाउँछ जस्तै; ग्लुटाथियोन र सुपरआक्साइड खण्डन। v
डोपामाइन- D2, सेरोटोनर्जिक र GABAB रिसेप्टर्सको साथ अन्तर्क्रिया। v
MAO-A र प्लाज्मा कोर्टिकोस्टेरोन स्तरको कटौती। v
Noradrenaline को एकाग्रता र केन्द्रीय monoamines को कारोबार कम कम गर्दछ। v
मस्तिष्कमा acetylcholinesterase गतिविधि निषेध। v
दिमागमा लिपिड र फास्फोलिपिडहरूको सामग्री बढाउँदछ। v
न्युरोन्सलाई ग्लुटामेट-प्रेरित विषाक्तता विरूद्ध बचाउँदछ। v
NMDA रिसेप्टर गतिविधि को मॉडुलन। v
फ्रि-र्याडिकल-स्केभेंजि activity गतिविधि; H2O2- प्रेरित cytotoxicity र DNA क्षति कम गर्दछ।
Lear बुस्ट लर्नि and र मेमोरी:
सिक्नु भनेको नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने वा अवस्थित ज्ञानलाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया हो, जबकि मेमोरी मस्तिष्कको क्षमता हो एन्कोड गर्न, भण्डार गर्न, र आवश्यक परेको बेला जानकारी पुन: प्राप्त गर्न। दुबै सिक्ने र मेमोरी अनुभवहरूको मजा लिन, भविष्यका कार्यहरूको योजना बनाउन, र जीवनको उच्च गुणस्तर कायम गर्न महत्त्वपूर्ण छन्।
Focus ध्यान र ध्यान सुधार गर्नुहोस्:
फोकस र ध्यान बाह्य वातावरणीय उत्तेजना बेवास्ता गर्दा एक मन मा एक मन मा ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता हो। त्यहाँ ध्यान दिन धेरै फरक पक्षहरू छन्, र तिनीहरूले धेरै अन्य संज्ञानात्मक कार्यहरू लिन्छन्।
Your तपाईंको मस्तिष्क उर्जा सुधार्नुहोस्:
दिमागले शरीरको उर्जाको २० प्रतिशत उपभोग गर्दछ, र दिमागको ऊर्जा समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ। पर्याप्त ऊर्जा बिना, मस्तिष्कको सबै संज्ञानात्मक प्रसंस्करण धीमा हुनेछ।
। एक राम्रो मूड गर्न सक्छ
चिन्ता र उदासीनता सहित मूडले विभिन्न प्रकारका दिमाग राज्यहरू समेट्छ। एक खराब मूड मस्तिष्क उर्जा, तनाव प्रतिरोध, र मस्तिष्क संचार को प्रभावित गर्न देखाइएको छ।
Your तपाईंको तनाव लचिलोपन बढाउनुहोस्
तनावले मानसिक प्रदर्शन र समग्र कल्याणलाई स्पष्ट रूपमा प्रभाव पार्छ। जबकि तनाव व्यवस्थापन कुनै पनि प्रोग्रामको मुख्य अंश हुनुपर्छ संज्ञानात्मक समारोह सुधार गर्न, केहि नूट्रोपिक्स पाउडरले सहयोग गर्न सक्छ।
Ne न्यूरोप्रोटेक्सन प्रस्ताव
जबकि धेरै व्यक्तिहरूले यी द्रव्यहरू द्रुत मस्तिष्क बढावाको लागि प्रयोग गर्छन्, नूट्रोपिक्सको दीर्घकालीन न्यूरोप्रोटेक्टिव लाभहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। केही अनुसन्धानहरूले सुझाव दिन्छ कि उमेर सम्बन्धी संज्ञानात्मक गिरावट को पक्षहरु स्वस्थ, शिक्षित वयस्कहरु मा शुरु हुन सक्छ उनीहरूको उमेर २० र 20० को उमेरमा भए पनि। अर्को शब्दमा, तपाईको दिमागको ख्याल राख्न यो कहिले चाँडो हुँदैन - र नूट्रोपिक्स पाउडरले भूमिका निभाउन सक्छ।
Nootropics कसरी प्रयोग गर्ने?
यदि तपाईं नूट्रोपिक सप्लीमेन्ट पाउडरको साथ प्रयोग सुरू गर्न लाग्नु भएको छ भने, सुरू गर्न तपाईंले केही साना लगानीहरू गर्नु पर्छ। सबै भन्दा उच्च-गुणस्तरको सर्वश्रेष्ठ नूट्रोपिक्सहरू शुद्ध शुद्ध रूपमा नूट्रोपिक्स थोक पाउडरको रूपमा बेचिन्छन्। स्वाभाविक रूपमा, तपाईं कसरी मापन गर्ने र Nootropic पाउडर कसरी लिने सोच्दै हुनुहुन्छ।
धेरै जसो यी यौगिकहरू प्रकृतिमा उपस्थित छन्, तपाईं त्यस्ता बोटमा आधारित खाना आफ्नो आहारमा थप्न सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले शाकाहारी र जैविक पूरकहरूको पूरै सम्भावित लाभ लिनका लागि आफ्नो आहारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। वा, तपाईं उनीहरूलाई पाउडरको रूपमा चिकनाई, चिया, वा रसमा थप्न सक्नुहुन्छ।
केही व्यक्तिलाई केहि पदार्थहरूसँग एलर्जी हुन्छ; यस कारणका लागि तपाईले आफ्नो शरीर र तपाईको डाक्टर सुन्नु पर्छ र यी नट्रोपिक सप्लीमेन्ट प्रयोग गर्नु पर्छ।
कुनै पूरकले खराब जीवनशैली विकल्पहरूको हानिकारक प्रभावहरू बढाउन सक्दैन जुन तपाईंको मस्तिष्क स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्दैन। तसर्थ, यी स्मार्ट ड्रग्स को अधिक फाइदा प्राप्त गर्न को लागी तपाईको जीवनशैली सकरात्मक परिवर्तन गर्नु पर्छ।
के Nootropics सुरक्षित छन्?
Nootropic सुरक्षा निर्धारण यो लाग्न सक्छ भन्दा अधिक जटिल छ। औषधि औषधिहरूको विपरीत, नूट्रोपिक सप्लीमेन्ट्स बेच्नु अघि उनीहरूको सुरक्षाको प्रदर्शन क्लिनिकल परीक्षणहरू गर्नुपर्दैन। Nootropics उत्पादनको सबै प्रक्रियाले nootropic सुरक्षालाई असर गर्न सक्दछ। नूट्रोपिक्स पाउडर स्रोतबाट नूट्रोपिक्स ड्रग्स अन्तिम प्रयोग।
Nootropics पाउडर nootropics पूरक को सबै भन्दा महत्वपूर्ण घटक हो, nootropics पाउडर निर्माता प्रत्यक्ष nootropics पाउडर स्रोत हो। एक राम्रो नूट्रोपिक्स पाउडर कारखानासँग निर्माण प्राथमिकताहरू सुरक्षाको साथ डिजाइन गरिएको हुनुपर्दछ शीर्ष प्राथमिकताका रूपमा।
अन्य कारकहरू Nootropics सुरक्षित असर समावेश:
(१) अनुसन्धान समर्थित सुरक्षा
नूट्रोपिकको सुरक्षा प्रमाणित गर्न उत्तम तरिका मानव क्लिनिकल परीक्षणहरू हुन्।
(२) उन्नत nootropic फारमहरू
जब Nootropic अवयवहरू (उच्च nootropics पाउडर) उच्च-गुणस्तरमा प्रस्तुत गरिन्छ, तिनीहरूको सुरक्षा सुधार हुन सक्छ
()) सावधानीपूर्वक बनाउने
()) सफा डिलिभरी
सुरक्षित नूट्रोपिक्स के कती राम्रो हुन्छ यदि तिनीहरूलाई क्याप्सुलहरू तपाईंको लागि नराम्रो लाग्छ भने? नूट्रोपिक सप्लीमेन्टहरूमा हामी कहिलेकाँही उत्पादकहरू क्याप्सुल, एडिटिभ र शंकास्पद घटक छनौटहरू प्रयोग गर्दछौं जुन सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमसँग सम्बन्धित छ।
()) नूट्रोपिक्स सहि लिनुहोस्
यदि तपाईं नूट्रोपिक्स किन्न चाहनुहुन्छ भने, पहिलो सोचाइ हुन सक्छ "के नूट्रोपिक्स सुरक्षित छ?" । यो सीधा हो वा कुनै उत्तर दिन गाह्रो छ। किनभने त्यहाँ धेरै धेरै भ्यारीएबलहरू छन् जसले नूट्रोपिक सेफ्टीलाई असर गर्न सक्दछ, घटकबाट कम्पोनेन्ट र ब्रान्डसम्म। Nootropics पाउडर किन्नु अघि, यो nootropics पाउडर स्रोत देखि वितरण गर्न, अधिक खोज गर्न राम्रो छ।